ကဗျာချစ်သူ (ခေးရော့စ်): စုပေါင်းစပ်ပေါင်း
မိုးတွေရွာနေတဲ့ စနေ ညလေး တစ်ညမှာပေါ့… အလွမ်းအိမ် ထဲမှာကွေးရင်း စိမ်းစို ညိမ်းညို နေတဲ့ တောင်တန်းတွေကို မြင်ယောင်ရင်း ရေဒီယို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ ဂွီဂေါ် တဲ့…ဟာဘာသံလဲ ဇီးကွက် အော်တာလဲ မဟုတ်ဘူးပဲ… တော်ပြီ TV ကြည့်တာပဲ ကောင်းမယ်။ ပန်…ပန်…ပန်…ပန်…ပန် တဲ့သေရော…မ၀ယ်နိုင်တဲ့ ရွှေကြော်ညာနဲ့မှ လာတိုးနေတယ်။ ပြန်အိပ်တာတောင် ကောင်းဦးမယ်။ အိပ်ပျော်သွားရင် ခွန်မြလှိုင် လို အိမ်မက်တွေ နဲ့ခြောက်ခြားမှာ စိုးရိမ်မိသေး။ ကဲကဲ အိပ်တော့မယ်။ခလော…ခလူး…ခလဲ….
ဟာ… ငါဘယ်ရောက်နေတာလဲ? သြော် ကန်ရေအေး နံဘေးမှာကိုး။ ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်လိုက်တယ် မီးထွန်းစရာ မလိုအောင် လင်း နေတာပဲ။ မီးလေး တစ်ပွင့်ရဲ့ အလင်းကိုတောင် မလိုအပ်တော့လောက်အောင် နေဘုန်း တန်ခိုးတွေ ကြီးမားနေပါလားဗျို့။ PK တစ်ခုဝါးစားရင်း အတွေးရပ်ဝန်း ထဲနယ်ချဲ့ နေမိတယ်။ အချိုကုန်လို့ ရေပြင်ထဲ -ထွေးထုတ်လိုက်ရင် မာန်လှိုင်းငယ် တွေများထသွားမလားလို့။ ယိမ်းနွဲ့ နေတဲ့ ကန်ရေပြင်ကိုကြည့်ပြီး ဟိုးတစ်ချိန်က လျှောက်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလမ်း က ၀င်္ကပါ မှတ်တမ်းကို ပြန်ပြောင်း အောက်မေ့နေချိန်ပေါ့။ တိုလီမုတ်စ အတွေးတစ်စ ၀င်လာပြန်ရော။ မော်စီတုန်း ခေတ်မှာ ကဗျာချစ်သူ တွေကို အဆုံးစီရင် တတ်လားပေါ့။ အခုချိန်ထိသာ သူ အသက်ရှင် နေဦးမယ်ဆိုရင် D J သမားတွေ၊ Rapster တွေ၊ ဘလင့် 182 ကြိုက်တဲ့ လူငယ်တွေကို ဘာများပြောမလဲပေါ့။ ဆိုးသွမ်း လူငယ်တွေရဲ့ မလေးမ ခန့် အပြုအမူတွေကို နှင်းဆီနီနီ တစ်ပွင့်နဲ့ ဂုဏ်ပြုမှာ မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်။ အတွေးက မဆုံးသေးဘူး… ဒိုင်းဒိုင်း တဲ့…ဟာဘာသံလဲ? မျှားပြာ တစ်စင်း၊ သေနတ် မျိုးစုံနဲ့ မောင်ရင်ငတေ ဦးဆောင်တဲ့ အောင်မျိုးဟန်တို့အဖွဲ့ပါလား။ ဟာ ကိုစိုးထက် နဲ့ 0kisu တို့လဲပါတာပဲ။ ပြေးဟ… ပြေးနိုင်မှ လွတ်မယ်။ အား… မောလိုက်တာ….ငါ အိမ်မက် မက်နေတာပါလား… မိုးလှိုင်ည ထဲမှာ မိုးချစ်သူ မဟုတ်တဲ့ ငါ့ရဲ့ ဂျူလိုင်အိမ်မက် လေးပြိုကွဲသွားပြီ။ ရန်ထောင်တဲ့ လူတွေကို ရန်အောင် ဖို့ငါ မကြံဆောင်နိုင်တော့ဘူးနော်။ သဘာဝရဲ့ မယ်လိုဒီသံစဉ် လေးတွေ ဇီဝိန်ချုပ်ငြိမ်း ကုန်ပါပြီ။
ကျွန်မ ချစ်တဲ့ ဘလော့ဂါ မောင်နှစ်မတွေရဲ့ နာမည်လေးတွေနဲ့ ပိုစ့်တင်ထားတာပါ။ အဆင်မပြေရင် ပြန်ပြောလို့ရတယ်နော်။
Posted by Chaos at Tuesday, November 06, 2007
စိုးထက် - Soe Htet ! November 6, 2007 at 3:10 PM
လာဖတ်သွားတယ် ကျွန်တော်က အဲဒီတုန်းက အဲဒီမှာ ဘာလုပ်နေတာလဲ ဟင် ... :P
စိုးထက် - Soe Htet ! November 6, 2007 at 3:12 PM
နာမည်တွေ ကို လင့်ခ် ချိတ်ပေးပါဗျို့ ... :)
ဆိုးသွမ်း November 6, 2007 at 3:31 PM
ဟားဟ...လှတယ်ဗျာ။ အတွေးကတော့ ပိုင်ပါပေတယ်။
Chaos ရေ။ အားလုံးထဲမှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း နာမည်နဲ့လိုက်အောင်
ဆိုးသွားတာပါလားနော်။ ဟဲဟဲ။ ဒါပေမယ့် ကျေနပ်ပါတယ်။ အခုလို ဘလောဂ့်မောင်နှစ်မ တွေအပေါ် သံယောဇဉ်ထားတက်လို့ပေါ့။
ဂျေဂျေ November 6, 2007 at 3:35 PM
မှားနေတယ် ပီကေဆိုတာ ၀ါးဖို့ မဟုတ်ဘူး ကိုက်ဖို့ ဟီး
မာန်လှိုင်းငယ် November 6, 2007 at 3:40 PM
ကောင်းတယ်။ ရီရယုံတင်မဟုတ်ဘူး။ Chaos ရဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေက တော်တော်ကောင်းတယ်နော်။ ကိုစိုးထက်ပြောသလိုပဲ အမည်တွေကို လင့်ချိတ်ပေးလိုက်ရင် ပိုကောင်းသွားမယ်လို့ ထင်တယ်နော်။ ဆက်လုပ်ပါဦး။
MELODYMAUNG November 6, 2007 at 4:46 PM
ဖွဟဲ့ လွဲပါစေ ဖယ်ပါစေ နာပါလို့ ပျော်သွားပြီးမှ အမယ်ငေး ဇီဝိန်ချုပ်ငြိမ်းတဲ့ အခန်းက ပါလား ဟရို့ ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း ကြန်ကြင်ပေး အနော်က ငယ်ငယ်လေးချိတေးတာ တေချင်တေးဝူးရှိုမှ :P
သန့်ဇော်မင်း November 6, 2007 at 5:25 PM
အတွေးကတော့ ကောင်းတယ်.. တကယ်ပါ။
နောက်လည်း များများရေးပါ.. အားပေးပါတယ်။
သန့်ဇော်မင်း November 6, 2007 at 5:28 PM
ချီးကျူးပါတယ်.. ဒီလိုမျိုးတွေ ရေးနိုင်တာ....
သန့်ဇော်မင်း November 6, 2007 at 5:37 PM
Anonymous November 6, 2007 at 6:46 PM
ဟာဟ ညလေး တစ်ည တဲ့ ရေးထားလိုက်တာလဲ စုံနေတာပဲ... ကောင်း၏ ကောင်း၏ ဆက်သာလုပ် ဘာပဲလုပ်လုပ် ကောင်းတယ်။
မင်းယွန်းသစ် November 6, 2007 at 8:15 PM
အော် သူလဲ တိုလီမုတ်စတွေ ရေးနေပါလား ဟိဟိ.. တိုလီမိုလီအသုပ်စုံပေါ့ဗျာ
မျှားပြာ November 6, 2007 at 9:48 PM
ဟိုက် ရှာလပတ်ရည် ...
အားပါးပါး ရေးတတ်လိုက်တာဗျာ ..
အစ်မရေ များများရေးပေးပါဗျို့အမောပြေတယ်ဗျာ.။
ရန်ကင်း November 7, 2007 at 12:15 AM
ကြင်န်ာသူဆိုပြီးပြောင်းလိုက်ရမလားဗျို ။့ :P
Anonymous November 7, 2007 at 8:06 AM
ရေးထားပါလိမ့်။ နီနီသာဆိုရင် အဲ့ဒီလို ထွက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်လိုစဉ်းစား၊ စဉ်းစား။
Winkabar November 7, 2007 at 10:02 AM
JulyDream November 7, 2007 at 11:36 AM
အိမ်မက်တွေ ပြိုကွဲသွားရင် ပြန်လျှော်ပေး ရမယ်။ ဒါပဲ။
လေးမ November 7, 2007 at 7:16 PM
မလေးမခန့် ဆိုပါလား...။ ဒါမခန့်တာ..။ ချစ်မ..ချစ်မ ဆိုပြီး လှတပတ နေရာမှာ မထည့်ပေးဘူး ....။ ဟွန့် ...။ တွေ့ မယ်....တွေ့ မယ်..။ ကြံ၂ဖန်၂ ...ဟန်၂ပန်၂ ... မြန်၂ဆန်၂ ... ဒန်..ဒန်..ဒန်...။ဂွတ်တယ်...ဆက်လုပ်...။
နိုင်းနိုင်းစနေ November 7, 2007 at 7:58 PM
ငစနေလား.. စနေမလား..း)
ကျေးဇူး... ကဗျာချစ်သူး)
AungMyoHan November 8, 2007 at 6:06 PM
ညီအကိုများ November 10, 2007 at 1:00 PM